China Waste Treatment Tank fekitori uye vagadziri | Boselan
Nekuda kwekuchinja uye nyore kweGFS tangi, inogona kushandiswa mune chero chinongedzo chekurapa tsvina, aeration tank, sedimentation tank, chlorine tank, nezvimwe. Zvinoenderana nenzvimbo dzakasiyana uye nenguva dzakasiyana, inogona kusanganisa kubatanidza kushanda pakati pematangi akasiyana siyana, pamwe neiyo anti-ngura mashandiro eGFS tangi, iko zvino ndiyo yekutanga sarudzo yemasewage ekurapa michina.
Enamel tekinoroji ndiyo tekinoroji yepamberi mumusika wetangi. GFS tangi rakagadzirwa neepamusoro-simba titanium chiwanikwa simbi ndiro seyakavakirwa zvinhu. Kuburikidza nehunyanzvi hwakatsigira mativi enamel tekinoroji, iyo simbi pamusoro yakafukidzwa neiyo inert glaze layer yekuzadzisa chinangwa chekuomarara uye kurwisa kwakanyanya ngura. Iine zvese zvakatenderedza mabhenefiti mushure mekunyudzwa mumakani nemhepo.
Kuisa nyore uye nguva pfupi yekuvaka.
Yakaderera yekugadzirisa mutengo uye hupenyu hwakareba hwebasa.
Iyo yekuvaka inochinja, inowedzerwazve uye inogadziriswazve.
Modular kumisikidza, yakakwira kuwedzerwa kukosha, yakakwira mwero.
Inodzora mhando, inokodzera mamiriro ekunze akasiyana.
Kugadzirwa kwemaindasitiri, kutaridzika kwakanaka, mhando yepamusoro.
Matangi eGFS anogona kupa makore makumi matatu 'ehupenyu hwehupenyu hwakareba husina chero kuchengetedzwa mukushanda kwemazuva ese. Uyezve, matangi eBSL anovimbisa gore rimwechete yemhando yewarandi yematangi ese kana apedza kuisirwa. Uku ndiko kuzvipira kwedu kune vese vatengi.
Pashure: Municipal Sewage Kurapa Tangi
Zvadaro: Chemical-yekuchengetera Tangi
Digester Tank Wastewater Kurapa
Septic Tank Kurapa Kwemvura Mvura
Tsvina Yemvura Kurapa Tangi
Kuchenesa Mvura Tangi